”Maxaad u booqatay Somaliland?” – Maraykanka oo FIISE u diidey gabadha ay wada socdaan RW Britain + Sawirro (USA & UK dalkee taageera Somaliland?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Maxaad u booqatay Somaliland?” – Maraykanka oo FIISE u diidey gabadha ay...
”Maxaad u booqatay Somaliland?” – Maraykanka oo FIISE u diidey gabadha ay wada socdaan RW Britain + Sawirro (USA & UK dalkee taageera Somaliland?)
(Hargaysa) 21 Agoosto 2019 – RW Britain ee Boris Johnson ayaa xalay weji gabax kala kulmay Maraykanka, kaddib markii saaxiibtii looga dhaartay inay gasho dalkaasi.
Carrie Symonds, oo 31 jir ah, ayaa dal ku gal ka dalbatay Maraykanka, si ay uga shaqeeyso dalka Maraykanka, iyadoo ka tirsan jamciyad dhanka degaanka ah, balse DF Maraykanka ayaa diidmo siisay.
Sida uu qorayo Daily Mail, waxaa diidmada loo sababeeyay booqasho ay Miss Symonds ku tagtay Bariga Afrika gaar ahaan gobol uu dagaal sokeeye la degey, sida uu qoray.
Wuxuu intaa raaciyay in gabadha ay is caashaqsan yihiin Wasiirka Koowaad ay raacday gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Nimco Ali, oo ka ololeeysa gudniinka Fircooniga, taasoo ay la tagtay gobolka woqooyi galbeed Somalia (Somaliland).
Wuxuu DM sheegay in mudadii ay halkaa joogeen ay la kulmeen Madaxwaynaha Jamhuuriyadda is magacoowday ee Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, kaasoo ay kala hadleen arrimaha haweenka iyo dikhowga badda.
Daily Mail ayaa sheegay in UK ay woxoogaa xiriir ah oo dhanka diblomaasiyadda ah la leedahay Somaliland, oo 91-kii sheegatay inay ka go’day Somalia, balse aanu Maraykanka – oo taageera Somalia – aanu xiriir noocaas ah la lahayn Somaliland.
Lama oga sababta tegitaanka Somaliland ay u keeni karto in fiisaha loo diido gabadha ay isku cindan yihiin RW Britain oo ah dal ay olog dhow yihiin Maraykanka, waloow aysan fadhin siyaasadda labada dal, tan iyo soo bixitaankii Brexit iyo Donald Trump.
Ha yeeshee, 2016, waxaa hannaanka fiise dalbashada Maraykanka lagu soo daray su’aal ah: ‘Miyaad u safartay Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia ama Yemen kaddib Maarso 1, 2011?’
Previous article”Waar anigu DOQON maahi!” – Lukaku oo kashifay arrin ay samaysay Man Utd oo keentay inuu ka calool xirto!
Next articleWiilkii reer Burco ee JACAYLKU jarribay & jacdii uu kala kulmay! (Qiso dhab ah)